2017 March 18 « QEERROO
Bilisummaa fi Tokkummaa
March 18, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Uummata tokko saba jechuu kan dandeessisu, afaan tokko, aaadaa tokko, dinagdee wal qabataa, yaadaa wal fakkataa fi dangaa biyyaa tokko qabaachuu dha. Uumatni Oromoo guddina hawwaasan saba tokkicha tahuun waan wal nuu gaafachiisu hin qabu. Yoo hiikaa sabaa irratti kan waliif gallu tahe Uummatni Oromoo saba tokko tahuu kan haaluu hin dandeenyu.
Sagalee tokkummaa jedhu qabatee dogongora heddutu deemaa jira. Ummatni Oromoo tokko tahuu qaba yoo jennu maal jechuu keenya? Akka uummatni Oromoo lama sadii jiruu goone fudhachuu dhaan tokko tahu qaba jechuun sabni Oromm jira jennee isa fudhanne wajjin faaluu taha. Kanaafii jecha keenya kana garaa uummataatti gototuu dhiifnee gara namoota dhuunfaa fi ijaarsoota deebisuu qabna.
Uummatni qabsoo bilisummaa oofaa jiru keessatti miti biyyoota bara dheeraa bilisummaa qabaatanii jiran keessatti yaada adda addaa qabaachuu irraa kan ka’e ijaarsa garaagaraa akka mul’atan ni aggarra. Ijaarsonni kun amma seera biyyaa sana wajjin faalaa hin taane nagaan taa’itaa mootummaa qabaachuu fi illee dorgomuu irraa kan isaa dhowwu hin jiru. Keessatti biyyoota Demokraasi Dhiyaa (Western Democracies) keessatti soda tokko malee yaadaa ofii ibsachuun rakkoo hin qabu. Biyyoota warra abbaa irreen (dictatorial) bulan keessatti yaada fi ijaarsa addaa qabaachuun rakkoo qaba. Continue reading →
ONN- “Qophii Oromtittii “
ONN: Qophii : Qanqee show Dr Jamaal fi Sagalee Raadiyoo Simbirtuu akkasumas Raadiyoo RSWO Continue reading →